Dubai Shaqo qorista & Xirfadlayaasha Shirkadaha ugu Sarreeya ee UAE 🥇
Dubai Shaqo qorista & Xirfadda Dubai ee ⭐⭐⭐⭐⭐
Shaqaaleynta Shaqaalaha magaalada Dubai yaa shaqaaleysiin doona? ⭐⭐⭐⭐⭐
Dalbashada Hay'adaha Shaqaalaynta ee ugu Fiican Dubai?
Published by Shirkadda Dubai City at November 4, 2017
Fursadaha Shaqooyinka Dubai
Codso Xirfadaha Magaalada Dubai
Dubai Fursadaha Shaqooyinka. In ka badan booqdayaasha 25,000,000 hal shay oo ka mid ah Imaaraadka Carabta Emirates a Shaqooyinka Dubai. Sababtan awgeed hay'adaha shaqada ee Dubai maareynta helitaanka shaqooyinka ugu badan ee shaqo doonayaasha maaddaama ay ka heli karaan internetka. Waxa ugu horreeya ee lagu xasuusto dhammaan dadka wax qora ee ku shaqeeya Dubai iyo shaqaale doonaya Dubai kuwaas oo hadda isku dayaya inay xirfaddooda ka helaan Dubai. Shirkadda Dubai City ayaa xoogaa macluumaad ah ka qortay shaqaalaynta shaqooyinka Dubai ee 2018 iyadoo taas maskaxda lagu hayo waxaan kugu taageeri doonnaa oo aan kugu hagi doonnaa shaqo raadintaada UAE. Laakiin inta waqtigaas la joogo, shirkadaheena waxaan jeclaan lahayn inaan ka bilowno hage iyo dulmar guud oo ku saabsan dhaqaalaha Dubai oo ku siin doona macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirkadaha qorista ee Dubai iyo Mumbai.
Dhaqaalaha Imaaraadka Carabta
The United Arab Emirates safka hore uun bay ka dambeeyaan Saudi Arabia. Ilaa hada dhaqaalaha Imaaraadka Carabta waa dhaqaalaha labaad ee ugu weyn shaqooyinka Sacuudi Carabiya ee ka socda adduunka GCC. Xilliga laga soo bilaabo 1996 illaa 2018 UAE waxay kordhinaysaa wax soo saarka gudaha (GDP) oo ah USD 770 (AED 3.1 trillion) ee 2016. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale fiiri shirkadaha shaqaalaynta. Sababta oo ah qaar ka mid ah ayaa ku koraya UAE. Tusaale ahaan, Goobta shaqada ee Careerjet-Dubai iyo Websaydh qoris ah. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Qeyb ka mid ah xitaa inkastoo dhaqaalaha ee Imaaraadka Carabta ayaa aad ugu tiirsan dakhliga saliidda iyo gaaska. Sida lagu xusay Dubai iyo Abu Dhabi waxay ku guuleysteen inay kobciyaan dhaqaalahooda tan iyo 1995. In gabagabada shidaalka, gaasta iyo gaaska dabiiciga ah, Imaaraadka Imaaraadka Carabta waxay u koraan si ay u noqdaan kuwo si fiican u yaqaan warshadaha Carabta Hoos waxaad ka heli kartaa shirkadaha ugu sarreeya si ay u shaqeeyaan ee a shirkad muhiim ah meesha aad ka heli karto Resume Resume gudaha UAE (iyo Bariga Dhexe)
Dubai Jobs - Shirkadaha ugu sareeya ee ka shaqeeya Dubai
Liistada Shirkadaha ugu Fiican Dubai
Inkastoo tani run tahay Hotel International Hotel Shirkadu waxay ka hawl gasho hudheelada 5,700 ee caalamiga ah. Isla mar ahaantaana, kooxda huteelka waxay soo saartey barnaamijka hordhaca ee lagu magacaabo Bilowga. Ujeedada cusub shaqaaleyaal maamulayaal hoose. Si wax loo qabto, maamulayaasha cusub waxay la kulmaan kooxda kormeerka iyo guryaha huteelka iyo maalin kasta waxay soo bandhigaan ee udhaxeeya dhaqanka hoteelka Marriott, heerarka, taariikhda iyo bartilmaameedyada iibka.
Xaruntan Marriot International, waxaa jira dalabyo badan oo shaqo. Tusaale ahaan, cusub qurbajoogta Hindiya ayaa laga dhigi karaa caasimadda Imaaraadka.
Sida sawir ka mid ah dhaqanka mareegta Mariott hotel, shaqaalahooda cusubi waxay sidoo kale yihiin la siiyo ikhtiyaarka shaqada at Dubai City Huteelka Marriott. Haddayse isha ku hayaan safarka adduunka iyo ka shaqeynta Dubai. Qiime kale oo muhiim ah oo shirkadu ka caawiso shaqaalaha inay horumariyaan xirfaddooda ku yaala hoteelka oo dhan suuqa caalamiga ah. Xaaladdan, Shirkadda Marriott International waa mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican ee ka shaqeeya shaqaalahooda.
Dubai Shaqooyinka FedEx Express
Waxa ugu horreeya ee la xusuusto Shirkadda FedEx dammaanad- horumarka xirfadeed ee haweenka uurka leh ee jooga UAE. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay aqoonsaneysaa aragtida qofka shaqaalaha ah. Si loola macaamilo FedEx waxay ku dhejiyaan habka adeegga dadka ee fekerka ah. Caddaymaha ugu adag waa maareynta iyada oo loo marayo Horumarka Award. Waqtiga fog, nidaamka shirkadda Fed-ka wuxuu aqoonsanayaa koox kasta xubin ka baxsan shuruudaha caadiga ah ee shirkadda. Falanqaynta ugu dambeysa, shaqaale kasta wuxuu xaqiijiyaa baahida macaamiisha waxaa lagu daboolay heerka ugu sareeya. Shirkadda ayaa sidoo kale eegaysa oo loogu talagalay maareynta cusub ee aagga magaalada Dubai.
The Shirkadda Shirkadda 2018. Shaqaaleyaal caalami ah oo kaliya ayaa jecel shirkadan. Sababtoo ah way fududahay in la dhigo iyaga. Isla mar ahaantaana shirkadu waxay qaadataa dhowr codsi shaqo maalintii. Sidaas daraadeed CV iyo warqadda daboolka waa inay si fiican u eegaan. Dhanka kale, shirkad qorista caalamka. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa boos banaan oo GCC ah oo leh FedEx Express.
Dubai Shaqooyinka Guryaha DAMAC
Guryaha DAMAC Wax walba oo la tixgeliyo shirkadan la yaab leh iyo iyaga bogga shaqada ee ugu sarreeya ee Dubai ku taal. Sida kor ku xusan, DAMAC waa xaqiiqdii ugu fiican ee fasal ka mid ah Bariga Dhexe iyo GCC suuqa rukunka ah ee hantida guryaha tan iyo 2002. Guud ahaan, Guryaha DAMAC oo bixiya adeegyo raaxo leh oo raaxo leh oo ku yaal Dubai. The fursadaha shaqo ee gabdhaha Hindiya shirkadan. Sidaa daraadeed, maalin walba waa sii kordhaya suuqyada ganacsiga iyo goobaha madaddaalada ee ku yaala gobolka Bariga Dhexe.
Qeybta DAMAC ee ugu badan oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya, Qadar, Jordan, Masar, Lubnaan, Turkiga iyo suuqyada boqortooyada Ingiriiska. Gaar ahaan, si toos ah, Guryaha DAMAC waa hogaamiye horumarineed oo raaxo leh shaqooyinka cusub ee Bariga Dhexe iyo shaqooyinka Emirates. Shaki kuma jiro shirkadani waxay ku dadaaleysaa in ay bixiso guryo riyo ah oo aan ahayn kaliya Dubai iyo Abu Dhabi. Laakiin dhinaca kale maareynta fikradaha nolosha ee gaarka ah Qatar tan iyo 2015. Macaamiisha iyo marti-gelinta aduunka oo dhan gudaha gudaha UAE.
Mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee Gacanka. Inta badan dadka Pakistan iyo Hindiya ayaa dalxiisayaal ah. Iskuday inaad shaqo ka hesho guryaha DAMAC. Dhanka kale, haddii aad rabto inaad shaqo ka hesho Dubai. Waa inaad tixgelisaa DAMAC maxaa yeelay shirkadan waa fursado badan loogu talagalay, sidaas ka bilow khabiirada raadinta xirfadaha!.
Dubai Shaqooyinka ACC - Carabta Shirkadda dhismaha
ACC (Shirkadda Carabta) abuuray si loo muujiyo Awoodda dhismayaasha Dubai. Acc ayaa la aasaasay Lubnaan ee 1967 laakiin hubaal, noqdaan dhismo horseed ah shirkad ku taal gobolka GCC. Waa in la xusuustaa in sanduuqyada shirkadda ay ka mid yihiin badi Bariga Dhexe iyo Hindiya maalgashiga ikhtiraaca iyo casriga ah. The shirkadu waxay bixisaa wareysiga socodka ee dadka shaqo doonka ah ee ka socda Imaaraadka. Xaqiiqdii, shirkadda 51 ee Shirkadda Arabian Construction Company, waxay leedahay maalgashi aad u sareeya oo ka socda Imaaraadka Carabta, waxayna qaabeeyeen qaababka caanka ah ee magaalooyinka waaweyn sida Dubai, Abu Dhabi, Doha, iyo London. Dhanka kale, shirkad ayaa dejisay kaabayaasha ee shirkadaha waaweyn ee warshadaha.
Markaa mar kale ACC waxay dhistay daryeelka caafimaadka ee degaanka Qatar. Shirkadda ugu fiican xafiisyada hudheelada hoteelada ee Dubai. Inkastoo ay maamusho $ 3,600,000 mashaariic ganacsi iyo degaan maalin kasta. Laakiin sida dhabta ah shirkad, diiradda ugu weyni waxay saaran tahay bixinta mashaariic tayo leh iyada oo la ilaalinayo caafimaadka ugu sareeya iyo heerarka amniga ee ganacsiga Carabta ee mustaqbalka Shaqooyinka ee Dubai.
Shirkadda dhismaha ee Arab Arabia aad bay ugu fiican tahay shaqaalaha maxalliga ah. Ku adkeyso inaad si adag uga shaqeyso sidii aad u siin lahayd shaqooyin cusub Dubai Indian. Waxaan hadda caawinaynaa si aad u hesho macluumaad ku saabsan Dubai iyo Abu Dhabi. Waxaad fursado shaqo ku heli kartaa gudaha UAE. Arrintan awgeed shirkad cajiib leh.
Dubai Shaqooyinka - Al Hokair Group
Shaqooyinka Al-Hokair Group sida dhabta ah ee dhabta Alhokair waa magac si fiican loogu yaqaan 'Dubai City' oo ay la wadaagto blog-ka Dubai. Iyada oo la iftiimiyay martigelinta Carabta ee Caalamiga ah iyo madadaalo Alhokair Group oo maamulaya hudheelada iyo sidoo kale dukaamo fashilmay muddo tobanaan sano ah. Shirkadda Dubai ayaa si fiican loo yaqaan caawimaad sharci ah ee raadinta shaqo raadinta Dubai. Intaa waxaa sii dheer, Tafaariiqda Fashionka Al Hokair waxaana la aasaasay isbarbar dhig marka UAE ay bilawdo inay horumar sameyso ganacsi waxay ahayd 1990. Xaqiiqdii, Hawlgallada shirkadu waxay ku baahsan yihiin gobollo badan oo kala duwan oo keliya ma ahan UAE laakiin sidoo kale, Boqortooyada Saudi Arabia, MENA, Central Asia, iyo Gobolada Yurub. Tusaalaha shirkadaha ay maamulaan: Banana Jamhuuriyadda, Bershka, Costa Coffee, Stradivarius, Topshop, Zara iyo kuwo badan in ka badan Dubai.
Al-Hokair Group - Shaqooyinka magaalada Dubai
Sidoo kale, shirkadda ayaa noqotay magaca ugu horeeya ee Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya. Si aan waxba u dhicin Qatar marka ay maskaxda ku hayso xirfad ku taal Bariga Dhexe. Maaddaama dalxiisku yimaado dunida Carbeed ayaa dhiirigeliya si ay u koraan xirfad ahaan. Waxaa sidoo kale muhiim u ah dhaqanka shirkadda kooxdu waxaa lagu aasaasay 1975 oo intaa dheer in lagu maal-galiyo ganacsiga madadaalada iyo marti-gelinta maamulka hoose ee Sheikh Abdulmohsin Alhokair. Iyadoo tan maskaxda lagu jiro Tobankii 5 sano ka hor mashaariicda kooxda ayaa ballaariyey si loo xoojiyo xarumaha madadaalada ee 79 ee ku yaalla UAE. Qodob kale oo muhiim ah oo leh Al-hokair waa in ay leeyihiin xarumaha 34 ee ku yaalla Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya iyo Qatar. Kooxaha Al Hoakir waxay bixiyaan Xirfadlayaasha loogu talogalay ardayda cusub waxay u dhoofayaan waxbarashada tacliinta ee MBA.
Dubai Shaqooyinka - Shirkadda Ericsson
Suuq gaar ah, Ericsson shirkadda waxay leedahay nidaam gudaha ah meel shaqaale kasta oo doonaya Dubai. Si kale loo dhigo, waxay hadda shaqaaleysiinayaan injineerro iyo horumariyayaal ku sugan Dubai. Iyadoo fiirogaar ah la siinayo telefoonka gacanta qorista taas wuxuu hubiyaa ganacsiga inuu koro sidaa daraadeed shirkadu waxay shaqaaleysiisaa dadka sida dhaw ula xariir telifoonkeeda dhaqanka iyo nooca WhatsApp horumariyaasha. Waa muhiim in la garto taasi waxay awood u siineysaa shaqaale cusub oo cusub si ay ugu guulaystaan ​​shirkadooda si dhakhso ah u dhaqdhaqaaqa.
Sharraxan shirkaddan waa oo weli ka shaqeeya suuqa caalamka. Dhinaca wanaagsan, shirkadu waxay samaysay nidaam kobcineed ee shaqaale kasta. Sidaa darteed waxay u sahlaysaa maareynta juniyadaha si ay u hesho geeddi-socodka dardargelinta guryaha si sahlan. Ericsson waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee ka mid ah shirkadaha horumarinta bulaacada.
Shirkadda Ericsson waxay markasta shaqaalaysiisaa maamullo cusub. Gaar ahaan haddii aad raadineyso shaqooyinka suuq-geynta suuqa UAE. Tani waa mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican ee la shaqeyn karo. Xaaladahaas oo kale, waa inaad bilowdid raadinta boggooda.
Dubai Shaqooyinka - Omnicom Media Group Mena
Qodob kale oo muhiim ah Xirfadda Dubai waxay noqon kartaa Omnicom Media Group (OMG). Shirkadu waxay rabtaa in shaqaalaheedu ay ku raaxaystaan ​​nolol wanaagsan oo nololeed oo ku dhex nool guriga. Dhinaca wanaagsan, OMG wuxuu qabanqaabiyaa kheyraadka bini'aadmiga ee dib-u-eegis ku samaynaya golahooda. Halkee ayaa u oggolaanaya shaqaalaha inay qoraan jawaabo wanaagsan oo been ah oo dib u eegis ku saabsan wax walwal ah oo la xiriira goobta shaqada. Omnicom Media Group waxay si weyn diiradda u saartaa isku-dheelitirka nolosha shaqada.
Caddeymaha ugu badan ee maaraynta maaraynta waxay abuurayaan shirkad hor leh oo ah ururada ugu sarreeya ee ay tahay in shaqaaluhu dhexdhexaadiyo Hab nololeedka Dubai, caafimaadka, iyo fayoobaanta oo ah shirkadda East East ee shirkadda cajiibka ah. Si kale loo dhigo, ururka ayaa sidoo kale waxay ku raaxaystaan ​​shaqaalahooda dhabta ah iyo ballanqaadkooda, gaar ahaan hoggaamiyeyaasha sare ee OMG, ayuu yiri Machadka GPTW.
Sidoo kale, ku xir qaybta Omnisom Media Group ee LinkedIn
Dubai Shaqooyinka - DHL Global Logistics
DHL Shaqooyinka Dubai, ayaa had iyo goor ka foojignaadaan shaqooyinka shirkada baabuurta ee Dubai ayaa si fudud u codsanaya codsiga shaqada waxayna sugaan taageerada. Guud ahaan DHL waxaad ka heli doontaa qalab kasta oo aad u baahan tahay si aad u leedahay shaqaale qora Dubai Dubai meel shaqo ee Madaarka. Si aad uhesho qaab kale, shirkadu waxay ku tuseysaa sida aad u bilaabi lahayd shaqo cusub todobaadyo gudahood. Si aad u buuxiso codsigaaga DHL. Qof kastaa wuxuu leeyahay fursad uu kula shaqeeyo noocaan Shaqooyinka shirkadaha ee Dubai.
Marka la eego boggan internetka ee Dubai, waxaad leedahay fursada ugu fiican ee guusha ay u qabato shaqooyinka Dubai iyo safarka. Inta badan, DHL waxay bixisaa nidaamka codsiyada fudud ee shaqo doonka. Waqtigan xaadirka ah, shirkadu waxay ku siinaysaa talooyin ku saabsan sida loo qoro codsiga guusha iyo shirkadda bogga internetka ee jawaabaha badanaa la waydiiyay ee ku saabsan jawiga shaqada ee gudaha shirkadda DHL. Kiiskan, Way fududahay in shaqo lagu helo Dubai.
Dubai Shaqooyinka Pepsico Dubai
Waqtiga dambe ama ka dib waa inaad CV CV si aad dib ugu eegto ilaa Shaqooyinka PepsiCo shirkad. Waqtiga ugu dambeeya PepsiCo ayaa ku soo wici doonta. Ilaa iyo intaad ka diiwaan gashan tahay waxaa laguu sheegi doonaa fursadaha mustaqbalka ee Imaaraadka Carabta. Gaar ahaan haddii aad dib u bilaabi kartid xirfadaha iyo xiisaha shirkadda. Falanqaynta kama dambaysta ah, shirkaddu ma shaqaaleysiiso oo kaliya Dubai, laakiin sidoo kale aduunka oo dhan. Tusaale ahaan shaqaale doonayaal ka yimid Koonfur Afrika. Dhanka kale shaqaalaha PepsiCo waxay u shaqeeyaan si adag si ay dadka u siiyaan dhadhanka Pepsi asalka ah. Tusaale ahaan, shaqaalaha Pepsico iyo maamulka sare marwalba waxay sameeyaan quwad iyo nafaqo ay macaamiishu u baahan yihiin.
Dubai Shaqooyinka - Dubai One Furniture One
Mid ka mid ah Isbeddelka aduunka ee shirkada moobiilka ee Dubai. Xarunta ee ganacsiga tafaariiqda alaabta, shaqaale kasta oo shaqo doonka ah ayaa aaminsan in shaqo lagu helo Dubai wuxuu leeyahay ujeedo badan. Hal shirkad ayaa doonaya in ay isbedelaan adduunka oo ay sameeyaan Bariga Dhexe meel wanaagsan. Waqtigan xaadirka ah shirkad raadinaya dadka wadata wadashaqeyntooda. U dir Residhkaaga oo warqad u qor shirkadaha dowladda. Shirkaddu waxay si cad u tilmaamaysaa jagada iyo waddanka aad codsaneyso.
Xaaladahaas oo kale, qofka shaqaalaha ah ee leh shirkad ayaa leh aragti isku mid ah kuwa kale ee la wadaagaya qiimaha asaasiga ah ee adduunka. Jacaylka Bariga Dhexe, Gacan gali oo naftaada rumee. Sidaa awgeed shirkaddan maalin kasta waxaad u baahan tahay inaad raacdo qiyamkaas. Si cajiib ah adiga oo aan xitaa isku dayin inaad codsatid haddii aadan ahayn qofkaas. Shirkad aad u wanaagsan maamulayaasha kuwaas oo raadinaya xirfad leh MBA.
Shaqooyinka ku yaal Dubai - Kan waa goob shaqo oo ugu fiican UAE
Inta badan, Shirkadda One noqo mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee la magacaabo 7th ee Aasiya ee ugu Fiican Aasiya oo u codeeyay No.1 Local Loo shaqeeyaha loogu talagalay ugaarsadaha shaqo ee Bariga Dhexe. Isla mar ahaantaana, Midku wuxuu noqonayaa 2nd Goobta ugu Wanaagsan tan iyo 2016 on Kooxda WhatsApp. Ku Ku bilow xirfadaada shirkadda ugu fiican suuqa tafaariiqda. Aad ayaad u fiicnaan kartaa shaqooyinka suuq-geynta ee Dubai. Dhamaan shirkad kadis ah waxay kugu qaadeysaa inaad kamid ahaato koox iibin iyo suuq geyn xiiso leh si aad u awoodaan ka caawi inay beddelaan Dunida Carbeed.
Dubai Shaqooyinka - Ku biir Kooxda Dell ee Dubai
Ku biir Kooxda Dell, Ku bilow xirfad Dell oo dhan ka mid ah mid deg deg ah shirkadda ugu fiican adduunka shaqaalaha Pakistan. Si toos ah oo ku jirta bogga shaqada ee shirkadda Dell ee Dubai waxaad ka heli kartaa dhammaad la'aan fursadda shaqo ee Pakistan ee Dubai. xagee tartan caqabad iyo abaalmarin ka helay UAE? Waxaa muhiim ah in la ogaado in Dell ay fursad ka hesho adduunka oo dhan Hindiya, Yurub, Mareykanka iyo Canada. Qodob kale oo muhiim ah oo shirkadani leedahay waa a koox ka kooban saaxiibo caalami ah.
Wixii hal shey, shirkadku waxay ku kiciyeen wada shaqeyn xoogan iyo is-kaashi suuq-geyn ah gudaha-dibedda. Iyadoo shirkadan maskaxda ku haysa, dhaqanka diiradda saarey horumarinta 2019 shaqaaleynta iyo si faahfaahsan u isticmaalaya qorayaasha ee Dubai. Wixii cabsi ah in tartamayaashu ay weerari doonaan iyaga Dell oo ka kooban bogga shaqada ee adag ee Dubai. Sidaa daraadeed, dad aad uquruxsan oo u hoggaansamaya waajibaadkooda ugu wanaagsan iyo iibinta iibka iyo guulaha IT-ga ee macaamiisha kasta ee Dell UAE
Shaqooyinka Dell Shaqooyinka Shaqooyinka caalamiga ah ee ka shaqeeya UAE
Ugu dambeyntii, waxaad shaqo ka heli kartaa Dubai oo leh Dell sida shaqooyinka suuq-geynta, jagooyinka is-qabsiga ee Aasiya, injineernimada Xirfadda UAE, maalgelinta mawaadiicda maxalliga ah, Qareenka Waxbarashada iyo xirfadda ee Dell, maamulka sare, hawlaha hawlaha, ilaha aadanaha waxaadna noqon kartaa mid ka mid ah qorayaasha Dell shaqooyinka Dubai iyo shaqooyinka banaan ee badan ee Europe iyo Bariga Dhexe.
Qosol leh Shirkaddu waxay leedahay awood xooggan oo dhinaca tiknoolajiyada ah. Oo waxaynu ku qoraynaa halkan our blog ee Bariga Dhexe. Waxa ugu horreeya ee lagu xasuusto Dell run ah sababtoo ah waxay ku shaqaaleeyaan hay'adaha ugu wanaagsan shaqada ee Dubai. Si faahfaahsan, adeegyadooda waa 100% oo loogu talagalay dadka u shaqeeya caalamiga ah ee ka shaqeeya UAE. Shirkadda Dell waxay abuuraysaa qiyam xoogan oo loogu talagalay shaqooyinka suuq-geynta suuqa ee Dubai, iyo goob shaqo oo kala duwan oo loo maareyn karo goobaha shaqo ee ugu wanaagsan Dubai.
Shaqooyinka Dubai - Kooxda Koodhka
Dubai Shaqooyinka ee Keenyarka taas oo ah shirkad firfircoon si uu u noqdo hogaamiye oo ah jawi ganacsi oo degdeg ah oo ganacsi ku leh Imaaraadka Carabta. Kooxaha dharka gaaban ee xirfad shaqo waa a bilaabi oo dhisto korriin xooggan oo xirfadeed. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, guusha Gacanta Kooxaha Gacanta waa maamulkooda iyo shaqaalahooda. Shirkada sida joogtada ah u leh tamarta, dhiirigelinta xafiisyada iyo khibradaha ganacsiga gudaha. Shirkaddu waxay wadataa darajooyinka sare ee la qiimeeyay sida Calvin Klein, Cath Kidston, Dune London halkaas oo ay horay u socdaan jawi tafaariiq leh oo xiiso leh oo xiiso leh oo ku yaala Imaaraadka Carabta.
Shaqooyinka Goobta Goobta ee Dubai City iyo Abu Dhabi
Qodob kale oo muhiim ah oo ka mid ah Kooxda Koodhadhku waa tababarka caalamiga ah ee caalamiga ah barnaamijka UAE. Gaar ahaan shirkaduhu waa inay bixiyaan barbaarin iyo qalinjebin cusub oo leh faham buuxa oo ku saabsan shaqooyinka bannaan ee ka jira UAE iyo fursadaha shaqo ee laga heli karo Bariga Dhexe ee warshadaha tafaariiqda. Ujeedada kordhinta dabeecada shaqaalaha ee dharka dabeecadda kooxda ee gudaha shirkadda.
Dhanka kale, shirkad dhab ah caawimaad si aad u hesho xirfad iyo xirfado lagama maarmaanka u ah inaad bilowdo shaqo cusub ee Keenyarka. Sidoo kale waa muhiim in aad ku noolaato qaab nololeed oo aad mustaqbalka u leedahay tafaariiqda aad u baahan tahay inaad wax badan ka baratid kooxda. Sida xaqiiqda ah, shirkad wuxuu leeyahay fursado tababar oo ku yaal Dubai City iyo Abu Dhabi, si aad shaqo ula hesho kooxda fadlan booqo Qaybta shaqooyinka Google.
Dubai Shaqooyinka - Shaqooyinka MasterCard
MasterCard mid ka mid ah shirkadda tiknoolajiyadda ugu fiican ee Imaaraadka Carabta in aan waxba ka sheegin ganacsiga lacagaha caalamka ee ay maamulaan. Inkastoo tani ay noqon karto runta MasterCard waa shirkadda No.1 oo ku shaqeeya habka ugu dhaqsaha badan aduunka. Iyo ka baaraandegida xogta 85,000,000 ee shabakada shabakada maalin kasta. Dhinaca kale, MasterCard macaamiisha ka soo jeeda Bariga Dhexe, Yurub, Canada, Aasiya, iyo Mareykanka.
Shirkadu way ka duwan tahay hay'adaha kale ee maaliyadeed sababtoo ah waxay shaqeeyaan. Isla mar ahaantaana shirkaddu waxay fureysaa ganacsatada, ka caawinta hay'adaha dowliga ah ee ka jira deegaanka ganacsiga. Iyadoo lid ku ah lacagaha, shirkadu waxay leedahay ganacsiyada in ka badan wadamada 250 iyo dhulalka sida Qadar iyo UAE. Dabcan, sheyga iyo xalalka Mastercard ayaa ah kuwa ugu fiican adduunka. Xaqiiqdii, shirkaddu waxay sidoo kale leedahay Shaqooyinka qorista Dubai ee laga heli karo 2018.
Xirfadda Sifooyinka - Shirkadaha ugu sareeya Ku shaqee Dubai
Dabcan, 14 Waddamada si ay u shaqeeyaan iyo in oo ay ka mid yihiin kuwa ugu fiican shaqooyinka Bariga Dhexe, Afrika, Yurub iyo Kanada kadibna mar labaad Hindiya. Muhiim u ah in la ogaado cid kasta Shirkadda Job seeker Dubai Hubso in qof kasta uu heli karo shaqo oo uu xubin ka yahay xubin ka mid ah "Splash". Dhibaatada dhinaca xun ee soo wajahday shaqaale kasta oo leh tamar iyo farxad inay ka shaqeeyaan Dubai.
Shirkadda dheer ee Bariga Dhexe marwalba raadinaya dadka hammuun leh diyaarna u ah inay ka shaqeeyaan Bariga Dhexe. Guud ahaan goobaha shaqooyinka ee shirkadda UAE samaynta maareynta hal abuurka iyo dhiirrigelinta. Ka dib markii dhan, haddii aad diyaar u tahay bartilmaameed cusub oo doonaya in ay ku raaxaystaan ​​oo ay bilaabaan xirfadaha shirkadaha sare si ay uga shaqeeyaan 2015 - 2016. Xoqdo ka samee a farqiga u dhexeeya jawiga Bariga Dhexe ee firfircoon.
Waajibaadka Shaqooyinka Dubai - Wakaalada PR Weber Shandwick
Shaqada Weriyeyaasha Weber Shandwick. Shaqada guud ahaan ee Weber Shandwick waa hab aad u wanaagsan oo loo bilaabi karo mustaqbal shaqo ee UAE. Fursadaha ayaa ka imanaya Dubai City. Wax walba oo la tixgeliyo Weber Shandwick waxaa laga yaabaa inay ku yaabiso xitaa haddii aad ka timid India ama Pakistan. Mararka qaar shirkad isweydaarsi ee WhatsApp Group ee taleefannimada gacanta, iyada oo aan dib loo dhigin qorista warbaahinta bulshada, sida caadiga ah, shirkadda waxay eegaysaa qoraallada qoraallada iyo warbaahinta isku dhafan IT-ga. Sida xaqiiqda dhabta ah, shirkadu waxay shaqeyneysaa dhow iyada oo la shaqaaleysiinayo shaqaale ku sugan Dubai.
Shaqooyinka Dubai ee qalin jabinta cusub Estée Lauder
Ilaa intaad dalbato shaqooyinka UAE isku day Estée Lauder bogga shaqada ee Dubai ee mustaqbalkaaga cusub ayaa halkan ka bilaaban kara iyada oo shirkadan sare lagu qiimeeyay. Ilaa wakhtigan xaadirka ah, La-taliyayaasha canshuurta Estée Lauder ayaa markasta ah kuwa ugu sarreeya ee shaqaalaha lagu soo bandhigo dukaamada iibiya. Inaad ka bilowdo meesha aad ka shaqayn karto waa meel kasta oo ka mid ah Dubai, Abu Dhabi, Doha iyo kuwo kale oo badan. Waa maxay sababta loo doortay in laguugu shaqeeyo dukaanka iyo Estée Lauder? Marka la eego qodobbada, waxaad u baahan tahay inaad jeceshahay inaad iibiso oo aad u noqoto adeeg tayo sare leh oo ku yaal Dubai. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qalin jabin dugsiga sare ama haddii aad leedahay waayo-aragnimo hore ee iibka ama waayo-aragnimada adeegga macaamilka ee shirkadu ay tahay bilowga ugu wanaagsan waayo xirfaddaada weyn ee Dubai.
Shirkadahan kala soco meelo yar oo kala duwan:
Counter Cosmetics Counter Manager Position
Meeleynta Mas'uuliyadda Xisaabaadka
Meelaynta Waxbarashada Sare
Shaqooyinka ku yaal Dubai - Hilti Careers
Xirfadlaha shirkadda Dubai oo la leh bogga shaqooyinka Hilti ee Dubai. Soo dhawoow ama wakhti dambe diyaar u noqo inaad hesho door cusub. Waa inaad, bilowdaa, shaqooyinka bannaan ee ugu dambeeyay ee Hilti. Dhanka kale, shirkaddan, waxaad shaqeyn kartaa shaqooyinka bannaan halkii aad ka noqon lahayd raadinta qaar ka mid ah hay'adaha shaqada ee Dubai. Iyadoo ujeedkani raadinayo goob shaqo ganacsi ama xataa ku leeyihiin xirfad wadani ah oo ku yaala UAE. Dhinaca kale, haddii aadan heli karin shaqo hadda waa inaad u dirtaa CV-da si aad u hesho mawqifka mustaqbalka.
Rajada ah in aad shaqo riyadeed wuu soo socdaa fadlan iska hubi usbuuc walba shabakada Hilti Career shirkad si joogto ah u cusbooneysiisa shaqooyinka gudaha Dubai oo leh fiiso ama aan lahayn fursado fiiso. Sida xaqiiqda ah, waxaad awoodi kartaa sjoojiso codsi shaqo oo aad u fiican oo kaliya sugto dhaqdhaqaaqa mustaqbalka ee mustaqbalka.
Dubai Shaqooyin - Mihnadaha Mars
Ujeedada loogu talagalay shaqo raadinta In Emirates xirfadiisa ay la leedahay shirkadda Mars Tani waa waxa aad raadineysid marka aad eegto shaqada. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shirkad ayaa goobo badan ku leh guud ahaan UAE dalka iyo adduunka oo dhan. Websaydhkan shaqo ee Dubai wuxuu doonayaa inuu kugu xirnaado dadka kale ee aan aqoon sida loo helo shaqo Dubai. Bannaanka shaqo-doonayaasha waxay jecel yihiin shaqooyinkooda suuq-geynta shirkadaha Dubai. Wixii cabsi ah in codsiga xirfadda uu waqti qaadanayo.
Waxaad ubaahan tahay oo kaliya inaad gashid email-kaaga oo waxaad u sheegtaa dhowr eray oo ku saabsan khibradaada iyo khibradaada shaqo. Dhammaan macnihiisu waa shirkadu waxay sii wadi doontaa in la ogeysiiyo qof kasta oo shaqaale ah ku saabsan khibradda soo socota ee ku saabsan fursadaha shaqada ee 2019 oo la mid ah waayo-aragnimadaada nolosha. Mars waa shabakad aad u horumarsan oo laga sameeyay Imaaraadka Carabta. Iyo in ka badan, waad awoodi kartaa shaqo raadso iyaga oo la hadla shaqaalaha HR.
Sidee loo tagaa Dubai shaqo?
Ujeedada loogu talagalay qorista Dubai, Ku soo biir kooxdeena gaarka ah ee Whatsapp Group ama si fudud ugu dar faahfaahinta emaylkaaga hoosta. Ujeeddadan awgeed, kooxdeenu waxay awood u yeelan doonaan inay dejiso digniinta shaqada Shaqooyinka warshadaha hoteelka. Shaqooyinka saliidda iyo gaasta ee Dubai, Xirfadaha IT-ga ee UAE, Shaqooyinka bannaan ee iibka iyo suuq-geynta. Si ay u raadso shaqaale qorista shaqada ee Dubai, sidoo kale faahfaahintaada u dir hay'adaha shaqada ee Dubai. Dhab ahaantii warshadaha iyo cusboonaysiinta shaqooyinka, waxaad ku heli kartaa adigoo ku dhajinaya email ama faallo ku saabsan qaybta xiriirka.
Muhiim u ah in la ogaado habka aanu u shaqeyno Dubai ayaa ah inaanu sare u qaadno Aqoonsiga Shaqaalaynta ee Shaqaalaha Dubai. Shirkadda Dubai City oo macaamiisha caalamka ka heshay Imaaraadka Carabta iyo Qatar. Iyadoo la fiirinayo shirkadaha ugu fiican Dubai, macaamiishayadu waxay doonayaan inay shaqaaleeyaan musharraxyo firfircoon oo cusub oo ka yimid India.
Shaqooyinka Dubai oo leh shirkadda Dubai City
Waxa ugu horreeya ee la xusuusto beddelaan xirfaddaada isla markaana isla markiiba ku biiri kartaa Dubai Shaqooyinka. Haddii aad hadda ka shaqeyneysid heerarka hoose ee waddankaaga. Isku day inaad u gudubto shaqooyinka heerarka sare ee Dubai. Si aad uga dhigto qaab kale oo shaqo ku qabato waaxyada sida adeega wax soo saarka ee Abu Dhabi, Xafiiska HR ee Dubai, maamul fudud xirfad u ah booska darawalnimada oo kaliya bilowga, maamulka hoteelka shaqooyinka Dubai, jagooyinka banaan ee shaqooyinka bannaanka, shaqooyinka badda ka baxsan ee Abu Dhabi, iibinta & suuq geynta shaqooyinka sare ee Dubai, shaqooyinka amniga ee GCC.
Nagala soo xiriir halkan Faahfaahin dheeraad ah si aad ugu biirto qoritaanka Dubai fursadaha shaqooyinka warshadaha annaga Kooxda WhatsApp. Qodob kale oo muhiim ah oo shirkaddeena leh ayaa ah waxaa lagu dari doonaa kooxda qorista ee Dubai. Sidoo kale asaasigaagu wuxuu ku jiri doonaa diiwaanka shaqaaleynta Dubai. Dhinaca dhinaca wanaagsan, marnaba ma ogaan kartid marka saraakiisha shirkadaha macaamiilku ay si toos ah kula soo xidhiidhi doonaan.